Fanontaniana 9 ho an’i Eduardo Arcos · Global Voices teny Malagasy
Fanontaniana 9 ho an'i Eduardo Arcos
Voadika ny 12 Novambra 2018 2:11 GMT
Iray amin'ireo Amerikana Latina izay namadika ny blaogy ho asa fivelomany i Eduardo Arcos avy ao Mexico City. Ankoatra ny blaoginy ALT1040, mpamokatra sy fanta-bahoaka, mpamorona ny Hipertextual, 10blogs sy izay zavatra hita toy ny tetikasa goavana be ho avy ihany koa i Arcos.
GV: Toa manomboka mipoitra ao Amerika Latina ny ”Lisitra-A” anà blaogera maro. Aiza ho aiza no handraisan'ny 9rules sy ny 10blogs anjara amin'izany?
EA: Indrisy, eny, misy izany. Fa ireo blaogera Meksikana no tena ifantohan'izany kokoa noho ireo blaogera avy amin'ny firenena hafa. Hisafidy ”tranonkala tsara kalitao” ny 9rules. Eny, somary arakaraky ny toetran'ny tsirairay izany. Ho lasa ”lisitra-A” an'ny tranonkalam-bilaogy ireo blaogy amin'ny teny Espaniola miditra ao amin'ny 9rules.
GV: Toa mifantoka amin'ny tefibika ny 9 rules. Misy zavatra ifantohan'ny 10blogs.com ve?
EA: Tsy dia misy loatra, vondrona mpinamana fotsiny izahay, miaraka, mifampizara vaovao, ary miezaka ny mifanampy. Fa tsy mitetika ny hifaninana amin'ny 9rule izahay.
GV: Nanana olana vitsivitsy niaraka tamin'ny ampihimamban'ny orinasa Meksikana mpisahana ny fifandraisandavitra TelMex ianareo vao haingana ary nanoratra mikasika ny mpamorona azy sady TeleJeneraliny, i Carlos Slim. Mihevitra ve ianareo fa hanomboka hisy ao Meksika atsy ho atsy ny mpanome tolotra aterineto hafa?
EA: Ny olana dia tsy maintsy mampiasa ny fotodrafitrasan'ny TelMex (amin'ny fomba iray na hafa) avokoa ireo orinasa rehetra miezaka ny hiditra ao amin'ny tsena Meksikana misahana ny fifandraisandavitra. Noho izany, miankina amin-dry zareo izy ireo… ary raha tolotra mahonena no omen'i TelMex, dia hanome toy izany koa ireo orinasa hafa. Ohatra, efa manome tolotra DSL izao ny AT&T, fa mbola mpamerina mivarotra ny tolotry ny TelMex fotsiny ihany izy ireo ka noho izany tsy misy safidy hafa.
GV: Fa maninona no tsy mametraka ny laharan'izy ireo manokana ireo orinasa hafa?
EA: Tsy mamela azy ireo ny governemanta.
GV: Niresaka mikasika tetikasa iray vaovao ianao tao anatin'ny podcast-nao farany teo – afaka manome hevitra kely anay ve ianao mikasika izany?
EA: Ah, mbola tsy afaka miresaka mikasika izany aho aloha izao. Ny zavatra azoko lazaina aminao dia ny hoe mandray anjara amin'izany ilay olona malaza be indrindra ao amin'ny FM radio aty Mexico City ka noho izany, ho zavatra goavana be io.
GV: Inona no heverinao fa ahafahana manampy amin'ny fanakambanana ny tontolon'ny blaogy Amerikana Avaratra sy Amerikana Latina?
EA: Indrisy, ny tenim-pirenena no olana fototra. Manana fifandraisana amin'ny olona toa an'i Xeni Jardin avy amin'ny Boing Boing aho, niara-niasa izahay vao haingana tao anatin'ny fandikana lahatsoratra nosoratan'i Jacob Appelbaum avy ao amin'ny Houston Astrodome. Namoaka tahadikan'ny fifampiresahana tao amin'ny Boing Boing izy ireo ary namoaka ny dikanteny tao amin'ny ALT1040 aho – tena lahatsoratra nalaza be iny. Miezaka ny mampiseho ny zavatra miseho ao Etazonia aho … tsy mamaky blaogy amin'ny teny Anglisy ny ankamaroan'ny mpamakiko noho ilay sakana apetraky ny tenim-pirenena, noho izany, tsy dia mahatratra Amerikana Latina mpamaky blaogy ny vaovao maro.
GV: Manana tranonkalam-bilaogy vao hitanao ka tianao indrindra ve ianao?
EA: Ny blaogy tiako indrindra tato ho ato, hmmm, fanontaniana sarotra be. Namaky im-betsaka ny blaogin'i Om Malik aho – manana zavatra vitsivitsy tsara izy. Ary amin'ny teny Espaniola, ny Pixel y Dixel no iray amin'ireo blaogy tiako indrindra.
GV: Inona no fihainonao?
EA: Ny tetikasan'i Steve Wilson (avy amin'ny Porcupine Tree) izay antsoina hoe Blackfield ary koa Clor no fihainoko.
GV: Eny ary, dia farany … aiza ny sticker-ko (sticker= sary fandraikitra) ?
EA: 🙂 Ho avy tsy ho ela ry zareo. Efa nahazo izany fangatahana izany tamin'ny imailaka aho. Lehibe dia lehibe ny ”manala tsy ho virtoaly” ireo olona vakianao amin'ny aterineto … farahafaharatsiny, amin'ny famakiana ny soratr'izy ireo amin'ny tena taratasy.